CNC စက်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှု, သံမဏိ Casting, လူမီနီယမ်ကာစ် - က Grand
အဆိုပါကုမ္ပဏီမှိုဒီဇိုင်း, သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့် CNC အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ machining, ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြု, processing နှင့်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုမဟုတ်သောစံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်စံအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စသည်တို့ကိုအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများ, သင်္ဘောများ, စက်ပစ္စည်း, ဆေးကုသမှု, အခြေခံအဆောက်အအုံထောက်ခံမှု, ပရိဘောဂပစ္စည်း, tool ကိုဟာ့ဒ်ဝဲ, အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြပြီး, အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်, ဂျပန်, အီတလီ, ကနေဒါ, တရုတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့ရောင်းချ ။
စုဆောင်းခြင်းနီးပါးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပြီးနောက်ကျနော်တို့စက်ယန္တရားကုန်ထုတ်လုပ်မှုကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောကြေးနီ, လူမီနီယံနှင့်ဇင့်သတ္တုစပ်အဖြစ် nonferrous သတ္တု ချ. မှာကောင်းသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖြစ်စဉ်ကိုတိကျစွာထုတ်ကုန်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ရေရှည်နှင့်အချို့သော ferrous သတ္တု foundries နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြား Anodizing အဖြစ်မျက်နှာပြင်ကုသမှုစက်ရုံများနှင့်အတူတည်ငြိမ်သမဝါယမဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖောက်သည်များအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
ရိုး Ring ကိုကုန်ပစ္စည်းပွင့်လင်း Die Process ကိုအလိုအလျောက် H ကို ...
High Quality စိတ်ကြိုက် Mini ကို Cardan Shaft custo ...
တစ်ဦးကသည် High Quality စိတ်ကြိုက် Mini ကို Cardan Shaft ...
OEM လူမီနီယမ်ကြေးဝါနှင့်သံမဏိ GE machining ...
စက်နှင့်အတူစိတ်တိုင်းကျစေကြေးနီ ချ. အစိတ်အပိုင်းများ
စက်တစ် drawing လူမီနီယမ်ခွံမာသီးဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုး ...
ပြည်ထောင်စု Conical လျောက်ပတ်ပိုက် , က Black ပျော့သံပိုက်လျောက်ပတ် , Tm ပိုက် Fittings , Flat ပိုက်လျောက်ပတ် ,4Way ကိုပိုက်လျောက်ပတ် , Tee လျောက်ပတ်အမြင့်ဖိအား Y ကိုပိုက် , အားလုံးထုတ်ကုန်များ